Global Aawaj | रुपन्देहीका खाँण गृहमन्त्री बन्ने रुपन्देहीका खाँण गृहमन्त्री बन्ने
रुपन्देहीका खाँण गृहमन्त्री बन्ने
बुटवल। रुपन्देहीका सांसद बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री बन्ने भएका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक प्रतिनीधि सभा सदस्य बनेका खाँण रूपन्देही क्षेत्र नं. २ का बासीन्दा हुन् । केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद बिघटनलाई सर्वोच्चले व्युँताएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसंगैको मन्त्रीमण्डलमा खाँण गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुन लागेका हुन् । खाँण देउवाका विश्वासीला पात्र हुन्।
विद्यार्थी राजनीति मार्फत २०३० सालबाट राजनीति प्रारम्भ गरेका खाँण हाल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हुन् । २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकबाट निर्वाचित उनी सङ्घीय संसदको प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पनि भएका हुन् । यस अघि रक्षा मन्त्री, शिक्षा राज्यमन्त्री रहिसकेका खाणले त्रिवि स्ववियू सभापति, नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष र तरुण दलको अध्यक्षको जिम्मेदारी समेत सम्हालिसकेका छन् । २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा रूपन्देही क्षेत्र नं. ३ बाट विजयी खाँण २०५१ मा समेत संसदका उम्मेदवार भएका थिए ।
राजनीतिक यात्राका क्रममा उनले पञ्चायतकालमा करीब २ वर्ष जेल-जीवन बिताईसकेका छन् । उनले ने.वि. संघको अध्यक्षको हैसियतले २०४६ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थी वर्गको नेतृत्व गरेका थिए । उनी ३ छोरी र १ छोराका पिता हुन।